“ အမြဲလိုလိုစွဲလမ်းမှု - စွဲလမ်းမှုသည်မြင့်တက်နေသလော” (ဂါးဒီးယန်း၊ ယူကေ) - သင့် ဦး နှောက်ပေါ်၌သင်၏ ဦး နှောက်
“ အမြဲလိုလိုစွဲလမ်းမှု - စွဲလမ်းမှုသည်မြင့်တက်နေသလော” (Guardian, UK)
တယ်ရီရော်ဘင်ဆင်, မစ်ရှီဂန်တက္ကသိုလ်မှစိတ်ပညာနှင့် neuroscience တစ်ဦးလေးစားခံရသောပါမောက္ခ - သူ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်, Kent Berridge အတူ - တဏှာများအတွက် neurochemical တာဝန်ရှိအဖြစ်ဖော်ထုတ် dopamine ။ သူစွဲလမ်း၏ semantic ဆွေးနွေးအကူအညီမရပါဟုထင်၏။ "ဒါကြောင့်မူးယစ်ဆေးဝါး, လိင်, လောင်းကစားသို့မဟုတ်ဘာပဲဖွင့်ပဲဖြစ်ဖြစ်, သငျသညျကလူ maladaptive အသုံးပြုမှုအနေဖြင့်အခက်အခဲဘဲရှိသည်ဘယ်မှာချင်တဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့-ထိန်းချုပ်မှုမမှန်မှာရှာဖွေနေပါတယ်။ တူညီပါဝင်ပတ်သက်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့် neurobiological ယန္တရားများ၏စည်းကမ်းချက်များ၌ဆက်ဆက်ရှိပါတယ်။ "
စွဲတစ်ချိန်ကထိုကဲ့သို့သောအရက်နှင့်ဘိန်းအဖြစ်လူသတ်သမားဆုတ်ခွာလက္ခဏာတွေနဲ့အတူတ္ထုများ, ရန် tethering တစ်ခုမြိန်မြိတ်ရောဂါ, အဖြစ်ရှုမြင်ခဲ့သည်။ ယခုမူကားလူသားစွဲနိုင်ပါတယ်အရာကိုအတိုင်းအတာသကြားကနေလူမှုမီဒီယာမှစျေးဝယ်ဖို့, မုဟုတ်ချင်းကြီးထွားခဲ့ကြပုံရသည်။ ဗြိတိန်ရဲ့ပထမဆုံး NHS အင်တာနက်စွဲလမ်းဆေးခန်းယခုနှစ်မဖွင့်လျက်ရှိ၏ ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ (WHO) ကယင်း၏အရာရှိတဦးကစှဲရောဂါလမ်းညွှန်ချက်များအတွက်ဂိမ်းကစားခြင်းရောဂါပါဝင်သည်သိရသည်။
ဤပြောင်းလဲမှု၏ပထမဦးဆုံးရောင်ခြည်အနည်းငယ် 1992 ၌ရှိ၏တပုဒ်ကြောင့်မိုက်ကယ်ဒေါက်ဂလပ်အစီရင်ခံရသောအခါ, - ဟောလိဝုဒ်မူပိုင်သည်ခေါ်ဆောင်သွားသည်းထိတ်ရင်ဖိုအခြေခံဗီဇများတွင်သရုပ်ဆောင်ကနေလတ်ဆတ်တဲ့ - လိင်စွဲလမ်းနှင့်အတူတစ် Arizonan rehab စက်ရုံအတွက်တက် holed ခဲ့သည်။ အဘယ်သူမျှမကိစ္စအကြောင်း, ဤသည်နေ့ရက်ရန်, ဒေါက်ဂလပ်တင်းကြပ်အစဉ်အဆက်အခွအေနေခံစားနေရပြီးငြင်းဆို - ငါတို့သည်စွဲရိပ်မိသည်လမ်း unfurl မှစတင်ခဲ့သည်။
အဲဒီအချိန်တုန်းကဟူသောဝေါဟာရကို၏ထပ်တိုးမကြာခဏပျင်းရိသင့်လျော်သကဲ့သို့ဆေးဘက်ဆိုင်ရာစက်ဝိုင်းထဲမှာကြည့်ရှုအားပေးသဖြင့်, သို့သော် neuroscience ယခုအကြီးအကျယ်ကအတူတူပင်ဦးနှောက်ဓာတု, dopamine, ဤ irrepressible မတရားသောကားမောင်းကြောင်းလက်ခံခဲ့သည်။ ပိုပြီးင်ကဘာလဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ 21st ရာစုကမ္ဘာကြီးဒါအကြီးအကျယ်တွေကိုနှင့်လှုံ့ဆော်မှုနှင့်အတူ baited ဖြစ်ပါတယ် - မသိမသာပါစျေးကွက်ရှိတဲ့ junk အစားအစာ, မဖော်ပြထားခြင်းအွန်လိုင်းအသက်တာ၏ချင်နေကြတဲ့ဆွဲဆောင်ဖို့ - က "hypersensitised" ဖြစ်လာရန်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ dopamine စနစ်များကိုအကြံအဖန်ခံရဖို့ပေါ်လာ။
"လူတွေကမြင့်တက်လာခဲ့သည်စွဲနေတဲ့အရာကို၏အကွာအဝေး," မိုက်ကယ် Lynskey, ဘုရင့်ကောလိပ်လန်ဒန်မှာစွဲနေတဲ့ပါမောက္ခအတည်ပြု။ "ငါ့မိဘများ၏မျိုးဆက်များအတွက်တစ်ခုတည်းသောရွေးချယ်စရာဆေးရွက်ကြီးနှင့်အရက်ခဲ့ကြသည်။ အခုတော့ဒြပ်အပါအဝင်ပိုပြီးမူးယစ်ဆေးဝါး, စီးပွားဖြစ်နှင့်နည်းလမ်းတွေနဲ့အတူရှိပါတယ် - အထူးသဖြင့်အွန်လိုင်း - ကွဲပြားခြားနားသောအရာတို့ကိုတာရှညျအသုံးပြုမှုကိုအားပေးအားမြှောက်ပြု၏ "။
ဤအထွန်းသစ်စသောအခြေအနေများ၏အတော်များများကအမူအကျင့်ထက်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ, ပစ္စည်းဥစ္စာ-related စှဲအဖြစ်ရှုမြင်ကြသည် - သို့သော်အကျိုးဆက်များသင်ျခြိုငျးကဲ့သို့ဖြစ်ရနိုငျသညျ။ လောင်းကစားဆေးပညာအ 2013 ကတည်းကအသိအမှတ်ပြုခံတော်မူပြီးမှအရှည်ဆုံးထူထောင်အပြုအမူစွဲဖြစ်ပါသည်။ မိမိကိုယ်ကိုသတ်သေမှုနှုန်း, ပစ္စည်းဥစ္စာစွဲများ၏ဖြစ်နိုင်ခြေအတူ compulsive လောင်းကစားသမားတွေအကြားပိုမိုမြင့်မားဖြစ်ကြသည်။ "ငါသည်သူတို့ရပ်တန့်မပေးနိုငျသောကွောငျ့တက္ကသိုလ်ထဲက drop သူကိုလောင်းကစားဝိုင်းကျောင်းသားများကိုတွေ့မြင်" Henrietta Bowden-ဂျုံးစ်လာမည့် NHS အင်တာနက်စွဲလမ်းဆေးခန်းနောက်ကွယ်မှအကြံပေးစိတ်ရောဂါကပြောပါတယ်။ "ငါအဆုံး၌၎င်းတို့၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများနှင့်မိသားစုများခံရကြောင်း, သူတို့ကကွဲပြားခြားနားသောအရွယ်အစားသုံးခုဆင်မြန်းဝယ်ယူမှမိမိတို့ကိုရပ်တန့်နိုင်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဤမျှလောက်အကြွေးတင်နေသောစျေးဝယ် compulsive နှင့်အတူလူကိုကြည့်ပါ။ "
တစ်ခါတစ်ရံသူမပြောပါတယ်, compulsive ကွဲပြားခြားနားသောကျင့်ဆိုးများအကြား flit ဥပမာ - အဘို့, မိသားစုပြဿနာတွေကနေခိုလှုံလုလင်တယောက်သည်ဂိမ်းနှင့်ညစ်ညမ်းအကြား toggle ပေလိမ့်မည်။ "ကျွန်မမနေ့က [တဲ့ဂိမ်းရောဂါလူနာ] ကိုမြင်လျှင်" ဟုသူမကထို့နောက်တ္ထုများနှင့်အဝတ်ပေါ်တွင်ပိုက်ဆံဖြုန်းဖို့သှားတဲ့သူ "ကထပ်ပြောသည်။ သငျသညျတစ်နည်းနည်းနဲ့အပြုအမူပြောင်းလဲနိုင်ပါတယ်ဒါပေမယ့်ကျွန်တော်သေးသောအကြောင်းကိုအလုံအလောက်မသိရပါဘူးတစ်ဦးနာမကျန်းပါပဲ။ "
ဒါဟာသို့သော်လစျြလြူရှုဤစိတျလှုပျရှားစရာအများအပြားဟာမျက်နှာပြင်၏ထိတွေ့မှာရရှိနိုင်ပါသည်ဆိုတဲ့အချက်ကိုခက်ခဲသည်။ အဆိုပါစွဲချစ်ခြင်းမေတ္တာကို Addaction ပြန်တမ်းလိုက်တဲ့အခါ အောက်တိုဘာလ 2018 အတွက် YouGov စစ်တမ်းဒါကြောင့်မိဘများကိုသူတို့ဂိမ်းနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးများနှင့် ပတ်သက်. စိုးရိမ်ပူပန်နှိုင်းယှဉ်တဲ့အခါမှာမူးယစ်ဆေးများနှင့်အလားတူအချိုးအစားနှင့်ပတ်သက်ပြီးဖြစ်သကဲ့သို့မိမိတို့၏ဆယ်ကျော်သက်ကလေးများလူမှုမီဒီယာစွဲခံအကြောင်းကိုနှစ်ကြိမ်အဖြစ်စိုးရိမ်နေကြကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒါ့အပြင်အောက်တိုဘာလအတွက်အီးယူကပြည်သူ့ကျန်းမာရေးသက်ရောက်မှုကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးရန်ရန်အင်တာနက်သုတေသနကွန်ယက်၏ဥရောပပြဿနာကိုအသုံးပြုခြင်းရန်ပုံငွေမယ်လို့ကြေညာခဲ့ပါတယ်။
လူတိုင်းမစွဲလမ်းအတိုင်းဤအသစ်ကမမှန် defining နှင့်အတူသဘောတူ - အားလုံးအပြီး, သင်သည်ထိုသူတို့အပေါ် overdose လို့မရပါဘူး။ လောင်းကစားခြင်းနှင့်ဂိမ်းကစားခြင်းစှဲ၏ WHO ကစာရင်းပေါ်မှာရာ၌ခန့်ထားပြီမှတစ်ခုတည်းသောသူများဖြစ်ကြ၏။ သို့သော်နားလည်မှုစွဲနေတဲ့ပါရာဒိုင်းပြောင်းလဲမှုလှုပ်ရှားမှု၌တည်ရှိ၏။
လိင်စွဲလမ်းယူပါ။ ဒီအငြင်းပွားဖွယ်ကျန်းမာရေးအခြေအနေကြောင့်ဆေးကုသမှုကိုရှာထိုကဲ့သို့သောဂေါက်သီးက Tiger Woods ၏အဖြစ်ကိစ္စများတွင်, သရော်ဘို့ရွေးနှုတ်ရန်အဆိုးမြင်ဖြတ်လမ်းအဖြစ်ဝေဖန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, အာရုံကြောဆိုင်ရာသိပ္ပံပညာရှင်လိင်နှင့်အတူ debilitatingly compulsive obsessive နှင့်အတူလူရဲ့ဦးနှောက်ကိုလေ့လာနိုင်ခဲ့ကြသူ အလားတူတုံ့ပြန်မှုသက်သေခံ သူတို့မူးယစ်ဆေးစွဲကိစ္စများတွင်ကြည့်ရှုလေ့လာခဲ့ကြသူတွေကိုရန်။
စွဲရောဂါများအတွက်စံသတ်မှတ်ချက်အများစုဟာသည်ဤရောဂါမှလျှောက်ထားကြဘူး, Lynskey says: "စာနာထောက်ထားရေး, တာဝန်ဝတ္တရား၏လျစ်လျူရှု, ရပ်တန့်ဖို့နိုင်စွမ်းမရှိခြင်း, ဆုတ်ခွာ။ " သကြားဆုတ်ခွာလက္ခဏာတွေဓာတ်ခွဲခန်းကြွက်များတွင်သွေးဆောင်ခဲ့ပေမဲ့ Withdrawal, အသိသာအဓိကအတားအဆီးဖြစ်ပါသည် - ချွေးတ , ခန္ဓာကိုယ်အပူချိန်, စိုးရိမ်ပူပန်ခြင်း, မြေတပြင်လုံး kaboodle ပြောင်းလဲမှုများချောက်ချားတော်မူ၏။ "တစ်ဂိမ်း session ကိုတိုတိုဖြတ်သောအခါဆယ်ကျော်သက်စိတ်တိုဖြစ်လာပါလျှင်, ထိုပျော့ဆုတ်ခွာတစ်ဦးစီရဲ့ရှိမရှိအဖြစ်အချို့သောဆွေးနွေးမှုရှိ," Lynskey ကပြောပါတယ်။
စွဲလမ်းအကြောင်းကိုရှာဖွေတာဟာသော့ချက်: Robinson နဲ့ Berridge "ကဲ့သို့" အဖြစ် "လို" နှင့်ပျြောမှေ့စဦးနှောက် opiates အဖြစ် dopamine ဖော်ထုတ်ခဲ့ပြီးတာနဲ့ - - နှစ်ခုကွဲပြားဖြစ်ရပ်သူတို့သင်ချင်နိုင်ရန်အတွက်တစ်ခုခုကိုကြိုက်ရန်မလိုပါကြောင်းရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်။ စွဲ '' ဦးနှောက်ထဲမှာ, တဏှာဟာသူတို့ရဲ့အလိုဆန္ဒ၏အရာဝတ္ထုနဲ့တူလျှင်ပင်သူတို့မရှိတော့မခံနိုင်သောဖြစ်ပါတယ်။ Berridge တခါပြောတယ် က "အကြီးအကျယ်", "ကြံ့ခိုင်" ဟုအဆိုပါဦးနှောက်ထဲမှာစနစ်များလိုသောကြောင့်အပျော်အပါး "ဟုအများကြီးသေးငယ်နှင့်ပိုပြီးပျက်စီးလွယ်ဦးနှောက်အခြေခံထားပြီးသော်လည်းဘဝပြင်းထန်သောအပျော်အပါးဘဝပြင်းထန်သောထက်လျော့နည်းမကြာခဏနည်းစဉ်ဆက်မပြတ်ဖြစ်ကြောင်းဒါကြောင့်ဖွင့် ... , အပျြောအပါးနှင့်အတူသို့မဟုတ်မပါဘဲဖွင်နိုင်ပါသည် "ဘုရားသခင်အလိုတော်ရှိ၏။ လူသားမြားသဒီတော့လွယ်လွယ်ကူကူထိုအမှုအရာတို့ကိုကျွန်တော်တို့ကိုပျော်ရွှင်စေဘူးလျှင်ပင်သစ်ပစ္စည်းပစ္စယနှင့် instant ဆန္ဒပြည့်လိုသောသို့ကြောငျးခဲ့ရကြသည်အဘယ်ကြောင့်ဒါဟာအစ, ဖြစ်ကောင်း, ရှင်းပြသည်။
"ဒီစှဲဖြစ်ပျက်ရဲ့အဘယ်အရာကို" ရော်ဘင်ဆင်ကပြောပါတယ် "ဟုအဆိုပါ dopamine စနစ်ကထိုအရောဂါဗေဒစိတ်ခွန်အားနိုးပြည်နယ်များမှဦးဆောင် hypersensitised ဖြစ်လာကြောင်းဖြစ်၏။ " သူက "ပြဿနာအမှုအရာတစ်ခုကျယ်ပြန့်အမျိုးမျိုးရှိပုံရှင်းပြကူညီနိုင်ကြောင်းသုံးအချက်များဖော်ထုတ်ထားပါတယ် "[စွဲရဖို့] ။ (သူက "လူမှုရေးအကြောင်းရင်းများသို့ရတဲ့အကြောင်းနှင့်အကျိုးသက်သေ၏စည်းကမ်းချက်များ၌အလွန်ခက်ခဲသည်က" သို့သော်သတိမ။ )
ပထမဦးဆုံးအချက်ကျနော်တို့ရဲ့ခေတ်သစ်ပတ်ဝန်းကျင်တဏှာ-inducing လှုံ့ဆော်မှုနှင့်အတူကျပ်ကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။ "လူတွေကစိတ်ခွန်အားနိုးပြည်နယ်များထုတ်လုပ်အတွက်ကြောင့်မူးယစ်ဆေးသို့မဟုတ်လိင်သို့မဟုတ်အစားအစာဖြစ်, ဆုလာဘ်နှင့်ဆက်စပ်ခဲ့ကြကြောင်းတွေကိုပါဝါတန်ဖိုးထားကြဘူး။ " တကယ်တော့စွဲအဆုံးရည်မှန်းချက်ထက်တွေကိုပိုပြီး like နှိပ်စတင်နိုင်ပါသည်, ထိုကဲ့သို့သောအဖြစ် ဒါကြောင့်အပေါ်မူးယစ်ဆေးဝါးများသွင်းယူနှင့် rigmarole ။ "အလွန်အမင်းအရေးပါတယ်လို့အစားအစာများနှင့်ဆက်စပ်တွေကိုအဆိုပါငွေပမာဏကိုယခုနေရာတိုင်းနေကြတယ်" ဟုသူကဆိုသည်။ "မူးယစ်ဆေးဝါးအဖြစ်ကောင်းစွာလိင်နှင့်လောင်းကစားနှင့်နှစ်ပေါင်းများစွာအတော်လေးနည်းနည်းပြောင်းလဲသွားပြီနှင့်ပိုပြီးပြဿနာကိုအသုံးပြုခြင်းမှဦးဆောင်နိုင်တယ်။ "
Lynskey "လောင်းကစားဝိုင်းစက်တွေများ၏စျေးကွက်နှင့်ဒီဇိုင်းအချို့ရှေ့ဆက်ကျွန်တော်တို့ကိုပညာရှင်များအားလုံး၏အသုံးပြုသူများကိုဆွဲဆောင် dopamine မြှင့်တင်ရန်နှင့်သူတို့ကိုထိန်းသိမ်းထားဖို့နည်းလမ်းတွေကြံစည်အတွက်ခြေလှမ်းဖြစ်ပါတယ်" ဖြည့်စွက်, သဘောတူ။ အဆိုပါခွင့်ပြုချက် quantifying နှင့်လူမှုရေးမီဒီယာစစ်ဆေးရန်မလှူစတငျခဲ့သညျ, ခလုတ် "နဲ့တူ" အလားတူဥပမာတစ်ခုဖြစ်သည်။ အစောပိုင်း 2018 အတွက်လူငယ်များအပေါ်ဆိုရှယ်မီဒီယာများ၏သက်ရောက်မှုသို့အစီရင်ခံစာမိတ်ဆက်ခြင်း, ဗြိတိန်ရဲ့သားသမီးရဲ့ကော်မရှင်နာအန်း Longfield ကြောင်းရေးသားခဲ့သည် "အချို့သောကလေးများနီးပါးစွဲဖြစ်လာကြပြီလူမှုရေး validation ကိုတစ်ပုံစံအဖြစ် '' likes ''" ။
ရော်ဘင်ဆင်ရဲ့ဒုတိယထည့်သွင်းစဉ်းစားသောက်သုံးသောဖြစ်ပါတယ်။ ငါတို့မှည့်သောစွမ်းအင်အရင်းအမြစ်များကိုရှေးခယျြကူညီပေးနေ, မုဆိုးစုဆောင်းခဲ့ကြသည့်အခါချိုမြိန်အရသာ၏ကျွန်ုပ်တို့၏အကြိုက်ကျွန်တော်တို့ကိုကိုက်ညီ။ အခုဆိုရင်ကျနော်တို့ဂလူးကို့စများ၏သဘာဝအဆင့်ဆင့်နှင့်အတူကြှနျုပျတို့၏စိတျမှုတ်ထားတဲ့ High-fructose ပြောင်းဖူးရည်, ရှိသည်။ အလားတူပင်မူးယစ်ဆေးဝါးများနှင့်အတူသူထောက်ပြ: "ဝါး coca အင်ဒီးစအတွက်အရွက်ဆေးလိပ်သောက်အက်ကွဲကိုကင်းကဲ့သို့တူညီသောမဟုတ်ပါဘူး။ အဆိုပါဆေးဝါးဗေဒကွဲပြားခြားနားသည်နှင့်ဤကိုလည်းစွဲမှ propensity တိုးမြှင့်ပေးနိုင်သည်။ "
သူ၏နောက်ဆုံးအချက်ရိုးရှင်းစွာသုံးစွဲနိုင်သည်။ "စားနပ်ရိက္ခာ, လိင်, လောင်းကစားများနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးများ - ရရှိမှုဤသည်နေ့ရက်ကာလကအတိတ်၌ရှိ၏ထက်အများကြီးကြီးမြတ်တော်မူ၏။ " (လိင်စွဲစားသုံး porn, sexting, compulsive တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေ, exhibitionism နှင့် chemsex ပါဝင်နိုင်ပါသည်။ )
ဤသူအပေါင်းတို့သည်အချက်များ, ရော်ဘင်ဆင် "- ငါကျနော်တို့ကသူတို့ကိုအားလုံးနားလည်သဘောပေါက်ကြဘူးသေချာပါတယ် - အမှုအရာအမျိုးမျိုးအတွက်ပြဿနာအသုံးပြုမှုများ၏ဖြစ်နိုင်ခြေတိုးမြှင့်ဖို့ရှုပ်ထွေးသောနည်းလမ်းပေါင်းစပ်" နေဆဲဖြစ်သည်။ ဒီကပိုကလူ dopamine စိတ်လှုပ်ရှား throbbing ၏ဤခေတ်အတွက်အန္တရာယ်မှာဖြစ်ကြောင်းဆိုလိုပါသလား? "သင်မူကားကြောင်းနေရာအနှံ့တွေကိုပိုမိုအစွမ်းထက်ဖော်မြူလာနှင့်တိုးမြှင့်ရရှိနိုင်၏ထိပ်ပေါ်မှာဝန်ကိုထမ်းရွက်ကြ" - ထိုကဲ့သို့သောဆင်းရဲချို့တဲ့ခြင်းနှင့်ကလေးဘဝကိုစိတ်ဒဏ်ရာအဖြစ်စွဲလမ်းများအတွက်ဗိုလ်မှူးအန္တရာယ်အချက်များ, နေတုန်းပဲသင့်ရဲ့ dopamine system ကိုပြန်ပေးဆွဲနိုင်ပါတယ်ဘယ်လိုအလွယ်တကူများအတွက်အရေးကြီးသောခန့်မှန်းနေကြသည်, ရော်ဘင်ဆင်ကပြောပါတယ်။
စွဲလမ်းစေအပြုအမူတွေ၏အမျိုးမျိုးကားမောင်းဘာအကြောင်းကိုနောက်ထပ်သီအိုရီအဖြစ်လူသိများနှောင်းပိုင်း 1970s အတွက်ကနေဒါကောက်ယူစမ်းသပ်ချက်တစ်ခုစီးရီးထဲကနေကိုအဓိကအားထား ကြွက်ပန်းခြံ။ ; အဆိုပါစိတ်ပညာရှင်ဘရုစ်အလက်ဇန်းဒါးဓာတ်ခွဲခန်းကြွက်, လွင်ပြင်သို့မဟုတ် drugged ဖြစ်စေသောက်ရေ၏ထို option နှင့်အတူဗလာလှောင်အိမ်ထဲမှာအထီးကျန်စဉ်ကအလွယ်တကူဘိန်းဖြူစွဲဖြစ်လာခဲ့သည်တွေ့ရှိခဲ့ သငျသညျကုမ္ပဏီအခြားယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းကြွက်နဲ့ကျယ်ပြန့်, ကစားစရာ-ဖြည့်ဝင်းထဲမှာကြွက်ထားလျှင်, ဘိန်းဖြူယှဉ်ပြိုင်နိုင်ဘူး။ အဆိုပါအခြေအနေတွင်မဟုတ်ဘဲမူးယစ်ဆေးဝါးသူ့ဟာသူထက်စွဲ, ကားမောင်းခဲ့သည်။ ရရှိလာတဲ့လေ့လာမှုကပုံနှိပ်ထုတ်ဝေသောအခါအနည်းငယ်မျှသာလှိုင်းတံပိုးကိုဖန်ဆင်း - ယနေ့သေးအလက်ဇန္ဒားသူ dislocation သီအိုရီခေါ်ဆိုသောစွဲလမ်းအပေါ်သူ၏ယူဝေမျှဖို့လောကီနိုင်ငံအရပ်ရပ်ရှိသမျှကျော်ပျံသန်းလျက်ရှိသည်။
"ဒီခေတ်သစ်ကမ္ဘာကြီးအသိုင်းအဝိုင်းအမျိုးမျိုးတို့ကို, အတိတ်ကာလလူတို့အဘို့အသက်တာကိုအဓိကကျတဲ့ကဏ္ဍနှင့်အပြည့်အဝကိုဖန်ဆင်းတော်မူကြောင်းကိုအစဉ်အလာနှင့်ဘာသာတရားနှင့်ပစ္စည်းပစ္စယအမျိုးမျိုးတို့ကိုဖြိုဖျက်" ဟုသူကပြောပါတယ်။ "သင်ရုံမပြောနိုင်ပါဘူး: 'OK ကိုယခုငါခေတ်မီပယ်ရှင်းပြီသင်သည်အဘယ်သို့ပြန်ပေးပါမယ်။ ' ' သူတို့ရှာတွေ့ဖို့မလိုအပ်ပါဘူးဒါကြောင့်လူကြီးပြင်းခြင်းနှင့်မလုံလောက်ပါအကြောင်းအရာဖြစ်နိုင်အောင်ကျနော်တို့အစဉ်စွဲ, တစ်ဦးချင်းစီကတခြားတွေနဲ့လူသားတွေအတွက်လုံလောက်သောဆက်သွယ်မှုရိုးရာလမ်းအတွက်ရှိပါသည်သေချာအောင်တခုတခုအပေါ်မှာမျက်စိနှင့်အတူပြုသကဲ့သို့ငါတို့သည်လူ့အဖွဲ့အစည်း reinvent ရန်ရှိသည် အသက်အဘို့အစွဲအတွက်အစားထိုး။ "
ဗြိတိန်နိုင်ငံတွင်ထိုသို့သော Addaction အဖြစ်အဖွဲ့အစည်းများ, သူကပြောပါတယ်, "အုပ်စုများသို့အတူတကွ [စွဲ] ရဖို့နည်းလမ်းတွေရှာဖွေမတွေ့ရှိခြင်းနှင့်လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းများတွင်ဤအုပ်စုများစိုက်ပျိုးနှင့်ဤအုပ်စုများရှိလူများကိုထောကျပံ့ဖို့သူတို့ရဲ့စွဲလမ်းမှုကိုစွန့်လွှတ်ဖို့မပေမယ့်တစ်ဦးရှိသည်ဖို့ရပ်ရွာလာပြီဖြစ်ကြောင်း အဓိပ္ပါယ်ရှိသောဘဝ "။ စတိဗ်ကွံ, Addaction မှာမူဝါဒကမန်နေဂျာကြီးသားအပေါင်းတို့, ထိုကဲ့သို့သောန်ဆောင်မှုများကဲ့သို့ "ကျနော်တို့ထွက်ရှိပါတယ်ကိစ္စများများ၏အဆင့်ကိုနားလည်ရန်ကြိုးစားရန်စတင်နေကပြောပါတယ်။ တဆင့်လာမယ့်ဒီမျိုးဆက်များအတွက်ဆိုရှယ်မီဒီယာကိုယေဘုယျအားကြီးမားတဲ့အရာနှင့်အွန်လိုင်းလှုပ်ရှားမှုများဖြစ်ပါသည်, သို့သော်အတိုင်းအတာမသိရပါဘူး။ "
အများဆုံးသေစေနိုင်သောတဦးတည်း - - ဗြိတိန်နိုင်ငံတွင် 30% ထက်လျော့နည်းဖို့ 50% ကနေကျဆင်းသွားခဲ့ပါသည်စှဲ၏အကွာအဝေးအတွင်းတိုးနေသော်လည်း Lynskey ပြောပါတယ်, နီကိုတင်းမှီခိုမှုအဆင့်အတန်းရှိသောကြောင့် 20 လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းရှိခဲ့သည်ထက်ဖြစ်ကောင်းနည်းပါးလာစွဲကလူနေဆဲရှိပါတယ် ။ သို့သော်ရောဂါလမ်းညွှန်ချက်များမှ updates များကိုအဆိုပါစွဲလမ်းရောင်စဉ်အပေါ်အနိမ့်ထိုင်သူတွေကိုယခုပြဿနာမှီခိုရှိခြင်းအဖြစ်ရှုမြင်နိုင်ပါတယ်ဆိုလို။ အဆိုပါသြဇာ American Psychiatric Association, သူကပြောပါတယ်, "အခုသူတို့မူးယစ်ဆေးသုံးစွဲပုံမမှန်၏တစ်ခုတည်းသောအမျိုးအစား၌ရှိကြ၏သော်လည်း, 'အလွဲသုံးစားမှု' နဲ့ 'မှီခို' 'အကြားခွဲခြားလေ့ရှိတယ်။ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်အဖြစ်အများအပြားလေးယောက်ျားအတွက်တစ်ဦးအဖြစ်အရက်မှီခိုများအတွက်သတ်မှတ်ချက်နှင့်တွေ့ဆုံရန်နှင့်အနိမ့်ပေမယ့်အမျိုးသမီး၏နေဆဲသိသိသာသာအရေအတွက်။ "ထိုသူတို့ဆုတ်ခွာသို့သွားလျှင်သေးဤလူသိမ်းယူမှုသို့မဟုတ်သေမင်း၏အဘယ်သူမျှမစွန့်စားမှုမှာဖြစ်ကြောင်းလိမ့်မယ်။ "တစ်ရောင်စဉ်ရှိပါတယ်" ဟုသူက "ဒါဟာအရက်သို့မဟုတ်မူးယစ်ဆေးမှီခိုသို့မဟုတ်စျေးဝယ်စွဲင်နှင့်လူအပြုအမူကိုအသုံးပြုခြင်း၏အနိမ့်အဆင့်မှာပြဿနာဖြစ်လာရာမှာအမှတ်အားမရနှင့်အတူနည်းနည်းပျြောရှငျဖြစ်လာကြပါပြီရှိမရှိ။ " ဟုဆို
Bowden-Jones ကအမူအကျင့်စွဲလမ်းမှုကိုကုသမှုအတွက်အကောင်းဆုံးသက်သေအထောက်အထား, (သင်ဘွတ်လွန်သွားကြပါဘူးဒါကြောင့်ဥပမာအားဖြင့်, အိမ်မှာနေတဲ့မတူညီတဲ့လမ်းကြောင်းယူပြီး) တွေကိုရှောင်ရှားကိုကူညီသိမြင်မှုအမူအကျင့်ကုထုံး (CBT) ကို အသုံးပြု. ကောင်းသောအပြုအမူဆုချီးနှင့်လူများယျကိုထပ်မံအတည်ပြုခဲ့သည်ကပြောပါတယ် ထိုကဲ့သို့သောလက်ပတ်အပေါ်အဖြစ်စဉ်ဆက်မပြတ်သတိပေးချက်များနှင့်အတူဆုံးရှုံးဖို့။
ကူညီစောင့်ရှောက်ရေးကိုလည်းနှိုးဆွ-ထိန်းချုပ်မှုကိရိယာပုံစံလာနိုင်ပါတယ်။ "porn, လောင်းကစားနှင့်အမှန်ပင်သင်သည်ဂိမ်းကစားဘို့အ မှလွဲ. နှင့်အတူပြဿနာရှိသည်အပြုအမူနှင့်အတူလုပ်ဖို့ဘာမှစောင့်ကြည့်ထံမှသင်တို့ကိုရပ်တန့်နိုင်သည်ကိုအရပျ၌ထားရန်စိတ်ကူးလုပ်ကွက်ရှိပါတယ်," Bowden-ဂျုံးစ်ကပြောပါတယ်။ ငါသည်ဤလုပ်နေတာထက်ပိုနှစ်နာရီတစ်ရက်ဖြုန်းဖို့မလိုအပ်ပါဘူး '' ဒါကြောင့်ကျွန်မကစား [နှစ်နာရီအကြာတွင်ကိုယ့်ကိုယ်ကို block ပါလိမ့်မယ်: "ကျနော်တို့ကသင့်တစ်နေ့တာ၏အအေးအဖြစ်မှန်အတွက်, သင်ပြောနိုင်ရှိရာတစ်ဦးအနေအထားရနျလိုအပျ ] ။ '' "ဒီတာဝန်သူမကပြောပါတယ်, ထိုဂိမ်းစက်မှုလုပ်ငန်းနှင့်အတူတည်ရှိသည်။
သတိသမ္ဘာဝနာကိုလည်းဥစ္စာအလွဲသုံးစားမှုလျှော့ချဖို့ကူညီပေးခဲ့တယ်။ တကယ်တော့ကအရက်အမည်မသိ 12-ခြေလှမ်းအစီအစဉ်နှင့် CBT ထက်ပိုမိုထိရောက်သောဖြစ်ရှာတွေ့ခဲ့သည် 2014 သုတေသနအတွက် စာရာသည် Bowden, Portland, Oregon တွင်ပစိဖိတ်တက္ကသိုလ်မှလက်တွေ့စိတ်ပညာ၏လက်ထောက်ပါမောက္ခကဦးဆောင်; ယခင်နှစ်က Bowden, Berridge နှင့်အခြား neuroscientific လငျးအိမျဒလိုင်းလားမားနှင့်အတူစွဲဆွေးနွေးရန်တွေ့ဆုံခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ပြီးနောက်ရှိသမျှတို့, ဗုဒ္ဓဘာသာအလွန်သူတို့ရှည်လျားသည်ဤ dopamine လောင်စာကြိမ်မတိုင်မီလူ့ဆငျးရဲဒုက်ခ၏ linchpin အဖြစ်ဖော်ထုတ်ကြောင်းတိုက်တွန်းထားသည်။ ကျော်လွှားရန်တရားအားထုတ်သုံးပြီး, ဒီတဏှာပြဿနာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းထောင်ပေါင်းများစွာ၏အပေါ်ဖမ်းမိ
တစ်ဦးကခေတ်သစ်စိန်ခေါ်မှုနေရာတိုင်းတွင်တွေ့နေကြားနေရသည်နှင့်လိုအပ်ချက်: အမူအကျင့်စွဲပြန်လည်ထူထောင်တဲ့အခါမှာသွားပြီလကျထကျများမှာဥပမာအားဖြင့်အစဉ်အဆက်-လိုအပ်သောအင်တာနက်ရှောင်ရှားရန်ပြောသည်နိုင်ပါသည်။ "မျိုးဆက်သစ်လူငယ်များလူမှုရေးအရပယ်ရှင်းခြင်းကိုခံရလိမ့်မယ်" ဟု Bowden-Jones ကပြောပါတယ်, "သူတို့အထဲကပျောက်ဆုံးနေတာခံစားရသောအခါအဘယျသို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လူနာတွေဆိုသညျကား, ကပိုပြီးသူတို့ပြီးသားတစ်ဦးနှင့်အတူပြဿနာထက်စနစ်တကျပါဝငျရှိသည်သောကို virtual ဘဝဆီသို့သူတို့ကိုတွန်းနေသည် "Moffat ပြောပါတယ်အမျှ" ။ သူတို့၏မျက်နှာ-to-မျက်နှာဘဝအသက်တာ၌သူတို့ validation ကိုမရဘယ်မှာကြောင်း "ပါပဲ။
ကျွန်တော်တို့အတော်များများဒီရောင်စဉ်၏အနိမ့်ဆုံးကိုပေါ်မှာငါတို့အင်တာနက်အလေ့အထများကြံစည်လိမ့်မည်ဟုငါတို့ဖုန်းများမှကျေးကျွန်, ငါတို့ပြန်ရတော့မှလိမ့်မည်ဟုဖြုန်းနာရီလုပ်ပြီးကမြင်းနေကြတယ်အကြိုက်များအတွက်စစ်ဆေးနေ, အင်တာနက်ယုန်တွင်းကိုဆင်းမှီဝဲ။ "အလွန်ကြီးစွာသောခြားနားရှိပါတယ်," မလိုအပ်ကြောင်းအလုပ်လုပ်တဲ့အသုံးပြုမှုနှင့်အသုံးပြုမှုအကြား Bowden-Jones က "လို့ပြောပါတယ်။ ဒါဟာသင်မကောင်းတဲ့ခံစားရစေသည်ဖြစ်သောလွန်းကိတ်မုန့်ကိုစားခြင်းနှင့်တူ၏။ ဒါကြောင့်ကဲ့သို့သောချွတ်စတင်ခဲ့ကြပေမည်ဖြစ်သော်လည်းထိုသို့အပြုသဘောဆောင်သည့်အတွေ့အကြုံကိုမယ့်, သိပ်ဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်မှာနေသောသူ။ "ဟုအဆိုပါ dopamine, တဖန်, အပျြောအပါးခြင်းမရှိဘဲရှိပါတယ်သွားသည်ပြည်သူ့။